Dr. C.raxmaan Baadiyow “in Soomaaliya dib loogu Celiyo Nidaam Qabiil Caqli maaha” | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Dr. C.raxmaan Baadiyow “in Soomaaliya dib loogu Celiyo Nidaam Qabiil Caqli maaha”
Dec 4, 2019 - 13 Aragtiyood
Nairobi ( Kalshaale ) Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyow oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ayaa sheegay in umadda Soomaaliyeed aysan wali gaarin halkii looga baahnaa 30 sano kadib, haddiiba ay wali taagan tahay nidaam qabiil oo aysan u diyaarsanayn doorasho qof iyo cod ah.
Baadiyow, oo ka mid ah xubnaha aadka ugu dhow xukuumadda, ayaa sheegay in kobcay caqliga dadka Somaaliyeed ee ganacsiga, isku-tashiga, iskaashiga iyo adkeysiga, loona baahnaa in xilligan doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka dhacdo.
“Waxaa kale oo muuqata in caqliga Soomaaliyeed uusan kobcin marka la dhisaayo dowlad. Tusaale waxaa h in 20 sano lagu cel-celiyay nidaam beeleed iyo xulitaan aan shaqayneyn. Waxaa gabi ahaanba meesha ka maqan xaqii muwaadinnimo iyo u sinaanshaha xuquuqda iyo waajibaadka” ayuu yiri Baadiyow.
“Waxaa sidoo kale maqan u hoggaansamidda qaanuunka! Dhanka kale, waxaa maqan in muwaadiniintu doortaan wakiilladooda iyo madaxdooda si xor oo xalaal ah. Muwaadinnimo, sareynta sharciga iyo doorasho dadweyne ayaa ah waddada dowladnimada. Nasiib darro, caqliga iyo dhaqanka siyaasiyiinta Soomaaliyeed wax badan iskama beddelin laga soo bilaabo 1956-ki. Dhaqankaas wuxuu soo dumiyay dowladdii dhexe 1991.”
Baadiyow ayaa ah la-taliyaha sare ra’iisul wasaaraha ee arrimaha nabadeynta iyo dib u heshiisiinta, waxa uuna ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee sida aadka ah ugu ololeynaya in dalka ay ka dhacaan doorasho qof iyo cod ah.
Siyaasiyiinta iyo aqoonyahannada sheegay inaysan doorasho qof iyo cod ah dhici karin sanadka soo socda ayaa sheegay in haddii dowladda ay daacad ka tahay qabasho doorasho noocaas ah ay ahayd inay ka shaqeyo saddexdii sano ee lasoo dhaafay.
Waxay rumeysan yahay in waxa hadda dowladda iyo xubnaha ku dhow arrintaas ugu dheggan yihiin ay tahay xaqiiqda ah inaysan suurta-gal ahayn, balse ay doonayaan inay waqti ku lumiyaan si muddo xileedka loogu kordhiyo.
W/Q: Cabdixakiin Cilmi Xasan
Warbaahinta Kalshaale kala soo xidhiidh Email: kalshaale.com@gmail.com
Hoose Ku Qor Fikradada ( 13)
December 4, 2019 at 6:46 pm
1960 markey midoobeen Koofur iyo Waqooyi si ay u dhistaan dowlad ay ku mideysanyahiin, loona qeybsadey Koofur iyo Waqooyi.
Ayaa waxaa dhacdey in Tuulooyinku istusaaleeyen – Xamar iyo Hargeysa ayaa MEESHA KU HESHIIYEY, kadibna waxey Talyaaniga ka codsadeen inuusan ka tagin Dhulka ilaa Hilbaha lagu qeybinaayo – IRIR IYO JABERTI (waa sidey hadalka u dhigeene)
3 bilood ayey qaadatey in laga dhaadhiciyo Qaran iyo Qabiil waa kala labo, midna waa sharci Xoolo Dhaqatada midna waa sharci Dowlad Cadaalad ku dhisan.
Taas ayaa keentay in la isbarbardhigo inuu Gumestuhu joogo ama Xoriyo la BIREEYO BISIN LA’AAN.
Ahmed Somali says:
Dabshidow, waxaa bày ciddii tariikhda Somali wax kaa weydiisa. °Markuu ku hex habaabay quraafaad Maskaxdiisa kaliya ka guuxa KU LAHAA; ” Taas ayaa keentay in la isbarbardhigo inuu Gumestuhu joogo ama Xoriyo la BIREEYO BISIN LA’AAN. °§*OO xurriyo Waaba la haystaaye Maxay tahay tan kale ee birta loo doonana?. °Hadalna wuxuu ka bilaabay; “1960 markey midoobeen Koofur iyo Waqooyi”. WBT
Hadde Neef aan Bisinka loo qaban miyaa Xalaal noqonaa
Wataas haddana Gumeystaha Madow lala hoos galey IN GOVERNOR MADAXWEYNE LOOGU YEERO
IN DEGMO DAL LOOGU YEERO
IN KENYA DEYAARAD LAGA DALBADO.
Haddey Jabuuti la midowdo Somalia, ma waxaa Qarannimo ah in la dhaho DIR ayaad tihiin EE DR BAYLE la shirkow oo qeybtii horey DIR u qaadatey Qeyb ka doono.
– Dadku qaarna waa CAD DOON,
– Qaarna waa Calan doon.
Dowladda DalKa Liverpool ee Dalka Britain
Mahmaaha ahayd, MADAX MADOOW IYO MIDI SAAWIRA MIDNA LAGA SAMRO, Haddaba waa kaa Dabshidba yiri; ”
Wataas haddana Gumeystaha Madow lala hoos galey IN GOVERNOR MADAXWEYNE LOOGU YEERO.
°§*=°§*Dabshid, Guulayso adeer, IN Governor loogu yeero M/WEYNE waxaa dhibsaday Adiga iyo aniga Akhyaarta kale ee Barxadda malaha raalli bey ka yihiin. WBT
Daanyeerkaan Baadiyow arka. Qof iyo cod kulahaa. Waa daanyeerro kuwa mas’uuliyiinta sheegta, iyo naagta Xaliimo Yareey la dhaho, ee dadka maalin kasta lasoo hor istaaga Somaliya ayaa waxaa ka dhaceeysa doorasho “qof iyo cod ah” Daanyeernimo kaweeyn hadalkaas majirro. Somalida inta badan waxba ma aqriyaan, mana qorraan, Somaliya inta badan nabad maahan, oo daanyeerta dowladda dhexe ee hadeer iyo kuwii ka horeeyay waa ku fashilmeen in tuugtaas argagixisda ah laga saaro meelaha eey joogaan, sidoo kale, maba layaqaan inta qof ee Somali ah ee nool, iyo Yugaandheeska iyo Somaliga si lagu kala garto iyo aqoonsi Somalinimo.
Markaas ayeey ka hadlayaan daanyeerkaan oo kale doorasho qof iyo cod ah. So stupid, walaahi.
Wiil hiraab says:
Meel kale intaan la gaarin Xaafada Boondheere o deris la ah Villa Wardhiigley cid so tirakoobtey ma jirto marka Baadoyow waxa u ku hadlaya beenti Candha Wadaagta xooga shilimaad ahna waa ka qaata o waa soda Sawirka Salaad Cali Jeele Cali Wajiis Cali Maxamed geedi imaanka bugta ah iyo Inna Cali ugaas o Caada qaate ah intaasi waa inta Abgaal qaribtey e Caloshood u shaqeeystayasha ah
Mr BaHaL says:
Aduunka dadku ma wada codeeyaan.Toban Tulo hadii laga codeeyo,waxaa la qiyaasi karaa tirada somalida.
Xisbi waliba intaa uu ka helo dadka ku nool Tobankaa Tulo loo xisaabin karaa,Ration ahaan.
Markaa waa la qaban karaa cod bixin qof iyo cod u dhacda.
Yurub dadka waxaa codeeya,% 30 – 40.
Inta kale guryohooda ayay iska fadhiyaan.
Markaa waa in la qabtaa cod bixin nin iyo codkiisa ah .
December 4, 2019 at 10:11 pm
Mr. BaHaL, come on, brother, dadka ha mislead gareeyn. Yurub iyo meel kasta waa run in “voter participation” uusan aheeyn hundred percent, boqolkiiba boqol, laakiin, taas macnaheedu maahan in eeysan isku dayin amaba eeysan qabanin codeeyn ah qof iyo cod. Dadka aanan codeeynin wadamaas iyaga iskood ayeey iskaga joogaan guryahooda oo u diidaan in eey codeeyaan. Laakiin, waa diyaar, oo xaaladahooda waa u saamaxeeysaa in eey codeeyaan.
Mr. BaHaL, waxa aad ka hadleeysid waa wax aanan democracy aheeyn, waa wax aanan caqliga gali karrin. Let’s say, in xaafada Boondheere ee Xamar eey nabad tahay, oo dadka awoodaan in eey codeeyaan, laakiin, eeysan xaafada Huriwaa, oo isla Xamar ah eeysan dadka awoodin in eey codeeyaan sabab amni, sabab jahli, sabab tirakoob la’aan iyo wax lamid ah. Markaa, dadka Huriwaa Dagan yaa wakil ka’ah, ma kuwa Boonsheere ayaa matalaya. Sidee buu qof amaba magaalo kale qof kale u matali karraa? Isku midba maahanee.
Wax eey daanyeerta madaxda Somaliyeed isku sheega eey wadwadeen ilaa iyo waagii madaxweeyne Hassan Shiiq ilaa iyo hadeer waa “epitome of idiocy” daanyeernimo tan uGu weeyn in laga hadlo doorasho qof iyo cod ah. Suurtagal kama ahan taas Somaliya 50 ka sanno ee soo socota. Ee dadka runta haloo sheego. Halagu wada wax sidii horre, ee 4.5 ka ahaa, ee qabiilada soo xulli jirreen xildhibaanada, laakiin, daanyeernimada iyo shaqa xumadda halajoojiya. Baryada iyo tuugsi halajoojiyo. Isla xisaabtan la’aanta hala joojiya.
Land of Punt says:
December 4, 2019 at 11:08 pm
Abwaan Maxamed Ibrahim Xadraawi ayaa Kacaankii mucaaraday 1970 Kacaankii oo 6 bilood jira.
Waxaa la waydiiyey Xadraawi nimankaan naga qabtay musuqmaasuqii iyo dibutati tuug ah maxaad u mucaaraysaa?
Wuxuu ku jawaabay hadal ilaa maanta aad ugu qiimeeyo abwaan Xadraawi….!
Wuxuu yiri: kuwaan Dibutatiyada anagaa dooranay oo doorasho ku bebeli karna laakiin kuwaan qori nagu qabsaday habeen barkii anoo hurudna oo anaga keensan yaa naga kaxayn markaan nacno.
December 4, 2019 at 11:13 pm
Aniga waxaan aaminsanahay sida mr Bahal sheegay in shacabka afti laga qaado xitaa haddaan loo dhamayn.
Dr Baadiyow waa nin raba in isa sharaxo,he is welcome, hadduu dalka talo u hayo.
Aniga haddaad rabto naive i dheh laakiin weli waxaan aaminsanahay, dowlad legitimate ah waxay ku imaan kartaa in shacabka codeeyaan.
Waana wax fiican in taas la higsado.
There’s no no other way…!
Land of punt,
Ku noqda markale adiga iyo aqoonyahan Mr. BaHaL, codeeynta aad ka hadleeysaan. Xaafad hebel hadii eey codeeysay, xaafad hebelna eeysan codeeyn, sidee beey dowlad uGu wada jirri karraan dad codeeyay oo isticmaaly xaquuqdooda mid kamid ah, iyo dad aanan codeeyn?
Somalida codeeyn, doorasho, dowlad, iyo waxyaabo badan ayeey dhagaha ka maqleen, oo dad consultants ah, oo Nairobi ku baashaala dhagaha uGu shubeen, markaaseey iskala ordeen.
Codeeyn anniga waxaa iiga muhiimsan dowladnimada oo la xoojiyo, oo lagu xoojiyo wada tashi, iyo karti iyo shaqo 24 hours/Seven days ah, iyo iyadoo argagixisda alshbaab guryahooda iyo meelaha eey joogaan lagu dillo, oo jidadka la dhigo. Taas iyo waxaas ayaa ka muhiimsan sheekadaan daanyeernimada ah ee qof iyo cod ayaa Somaliya ka dhaceeysa.
Somalida lama yaqaana qofka Somaliga ah iyo kan aan aheeyn, kii dhintay iyo kii dhashay iyo kii nool, kii baxay iyo kii soo galay dalka. Kii xun iyo kii fiican.
Halaga daayo dadkaan daanyeerta ah ciyaarta iyo marin habaabinta.
Somaliya waa 18 Gobol.
13 Gobol oo Koonfur ah iyo 5 Gobol oo waqooyi ah.
13-ka gobol ee kuurfurta iyo Sanaag oo waqooyi ah waa laga codaynkaraa sida ay u dhanyihiin.
Garoowe,Bosaso,Gaalkacayo,Cadaado,dhuusamareeb,Baladawayne,Caabudwaaq,Kismaayo,Xudur,Baydhabo,Marka cadeey,Badhan,laaqoray iyo Muqdisho,intaaba waa laga codaynkaraa.Hadii laga codeeyo 14 Gobol oo ka mid ah 18 gobol ee somaliya arinku wuu dhanyahay.
Taasi waxay ka dhigantahay in laga codeeyay in % 80 dhulka somaliyeed.
Waxa kale oo ay ka dhigantahay in dadka somaliyeed ay codeyeen,% 70.
Hadiiba aad ogoshay in Reer Yurub iska seexdaan marka la codaynayo oo ay 30 – 40 % codeeyaan,wax diidayaa ma jiro hadii ay % 40 somaliyeed waayeen fursad ay ku codeeyaan.
Sobobta ay dadku u codaynwaayeen uunbaa kala duwan,laakiin jawaabtu waa isku mid,dadkii aan dodaynin ayaa lagu xisaabinayaa.
Midna wuu iska seexday oo diiday inuu codeeyo,kiii kale ee somaliyeedna wuxuu waayay fursad uu ku codeeyo.
Dadka intii codaysay uunbaa codkooda la tix galinayaa.Mihiim ma aha meesha ay ku maqanyihiin,iyo waxa ay diidanyihiin,laakiin intii timiday uunbaa la tirsanayaa.
Haatan,somaliya in laga codeeyo oo shacabka somaliyeeed codeeyaan way dhicikartaa,% 100.Si fiican ayay uga dhicikartaa.
Hadii la rabo in la soo xerayso dadkii la kala iibsan jiray waa sheeko kale,laakiin hadii la rabo wixii hore in laga gudbo,waa la samaynkaraa,wax diidanina ma jiraan.
Sheekh Umal oo si fiican u sharaxaya,wax aan inbadan shegijiray.
Dad farabadan oo isku kaashada duminta diinta iyo dawladnimada.
Qaraxa Muqdisho alshabaab oo kaliya ma fuliso.
Sidaa ayaan aaminasanaa waligay.
SAWIRRO: Laascaanood oo Marti gelisay Bandhiga Caalamiga ah ee Buuggaagta
Laascaanood ( Kalshaale ) Magaalada Laascaanood ee Xarunta Gobolka Sool ayaa maanta waxay ...
Garoowe: Cabdixakiin Dhoobo Daareed oo Maanta laga Xayuubiyey Xildhibaanimadii
Garoowe ( Kalshaale ) Baarlamaanka Puntland waxaa maanta la hor keenay mooshiin xasaanad ka qaadis ...
Puntland oo war kasoo Saartay dagaalka Khasaaraha gaystay ee Gobolka Mudug
Gaalkacyo ( Kalshaale) War Saxaafadeed ay baahisay Madaxtooyadda Puntland ayaa loogu hadlay Colaada khasaaraha badan gaysatay ...
KENYA : Weerarkii lagu dilay 11 Qof ee Wajeer iyo Ninkii Hogaaminayey oo la shaaciyey
Nairobi ( Kalshaale ) Dowladda Kenya ayaa shaacisay magaca Ninkii hoggaaminayay Weerar Jimcihii la soo ...
Muuqaal: Warbixin Murugo Xaalada Soomaalidii Dabku ku Qabsaday Minnesota iyo Wixii dhacay
Minneapolis ( Kalshaale ) Warbixin Murugo Xaalada Soomaalidii Dabku ku Qabsaday Minnesota iyo ...
JIDKA GUUSHA - SH. DIRIR
© 2019 Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan - All rights reserved.
Designed By: Eawhost Ltd.